Ndeewo na Ezi Egwuregwu na Ahịa na 2013 | Martech Zone
Ndeewonu na Ezigbo Ego na ahia na 2013
Afọ a ọ tara gị ara? Ọ meere m. Ọ bụ afọ siri ike dịka nna m nwụnahụrụ m, ahụike m tara ahụhụ, ma azụmaahịa ahụ nwere obere nsogbu - gụnyere nkewa na ezigbo enyi na onye otu m. Fol na-agụ akwụkwọ na-agụ blọgụ m maka ozi ahịa ka m wee ghara ilekwasị anya na nsogbu ndị ọzọ (agbanyeghị na ha nwere nnukwu mmetụta), achọrọ m ịgwa ndị ahịa na teknụzụ ọrịre.
Ire ahịa na 2013 riri elu
Anyị ji afọ ahụ dum na-enwetaghachi ndị na-eso ụzọ ya na usoro egosipụtara, nke ọma, nke nwere ọtụtụ ọwa. Ihe ndị na-egbuke egbuke n'afọ a juru ebe niile. Ndị ahịa anyị gbanwere ego ma tinye ego na ọtụtụ teknụzụ afọ a nke kwere nkwa ọtụtụ ma nyefee ọnya. Ọ na-eme ka anyị kwụsị ihe anyị maara ga-arụ ọrụ ogologo oge na ike. Ọ tụbara ezigbo ego na akụrụngwa na atụmatụ nke na-enweghị ihe ọ bụla. O zuuru ndị ahịa anyị, mgbe ha lọtara, ha enweghị ego iji gaa n'ihu na-arụ ọrụ.
Ihe ndọpụ uche, iesgha na Nrụgide
Ihe gbanwere na m n’afọ a ka m na-agwa ndị ahịa okwu. Amalitere m ịdị ka curmudgeon n'ime ụlọ karịa echiche guy. Dịka anyị na-agbanye nnukwu ohere ọhụụ, ọ dị m ka m ga-awakpo ma debe ọtụtụ ndị ọzọ n'ọnụ mmiri. Anyị lụrụ ọgụ ka ndị ahịa anyị leghaara anya mkpanaka anya, usoro vidiyo, ma nwee ọganiihu ọdịnaya.
Nrụgide nke ụlọ ọrụ ndị a jọgburu onwe ya… ndu chọrọ nsonaazụ ngwa ngwa, belata mmefu ego, ma belata ọnụ ọgụgụ ndị ọrụ. A manyere ụlọ ọrụ ime mkpebi na-adịghị mma mgbe mkpebi ọjọọ gachara na ụlọ ọrụ udele ndị na-eri ha nwere obi ụtọ karịa ịbanye ha, nara ego ha, ma hapụ ha na enweghị ihe ọ bụla. Ọ na-efu ọtụtụ ndị enyi m nọ n'ụlọ ọrụ ịhapụ ma ọ bụ chụọ n'ọrụ. Echere m na ọkara nke njikọ LinkedIn m nwere aha ọhụrụ na ụlọ ọrụ ọhụrụ.
Laghachi na Ntọala Ya
Afọ a bụ afọ elebara anya. Azụmaahịa anyị alaghachila na isi ya iji hụ na ndị ahịa anyị nwere ntọala ahịa azụmaahịa dị mma na-esote site na ọdịnaya siri ike, usoro mmekọrịta na nyocha nke na-ewulite ikike na mmata nke ụdị ha. Anyị ga-aga n’ihu na-enyere ndị ahịa anyị aka ịwakọ ma rụọ ọrụ na teknụzụ, mana gbochie ha ịdọpụ uche ha. Anyị na-aga na-emeghe banyere ihe na-arụ ọrụ na ihe na-adịghị nke afọ a.
Enweghị m mmasị na amụma n'ihi na agaghị m eme ha. A bụ ihe anyị lekwasịrị anya na 2014 na-elekwasị anya na anyị na-pushing na ndị ahịa anyị:
Gbaa mbọ hụ na ahịa ha dị n'ịntanetị nwere ntọala siri ike nke akwadoro chọọ na mmekọrịta - iwu ụlọ maka ụdị na ndị nọ n’azụ ha.
Inbound ahịa mmejuputa iwu na tụọ ihe ma na-edu ndú ndị ọbịa site na ire ahịa na ọwa ntụgharị.
Na-echedo ma na-ewu ụlọ na atụmanya, ndu, na ndị ọbịa site na nnukwu ozi ịre ahịa na azụmaahịa azụmaahịa.
Na-arụ ọrụ na mmụba mobile na nkuchi - gụnyere ederede ederede, ekwentị mkpanaaka, email mkpanaka na ngwa mkpanaka.
Inye mmefu ego maka eserese, vidiyo ọkachamara, webinars na ndị ọzọ na-ajụ ndị mmụọ ase nke ahụ na-enyere aka ịkọwapụta uru dị mgbagwoju anya ngwa ngwa ma melite usoro ntụgharị na ọnụego.
na-achọ ohere nkwado nke na-eme ka ị mata ma nweta ngwaahịa, ọrụ anyị, ndị mmadụ na ụdị aha n'ihu ndị na-ege ntị ọhụụ dị mkpa.
Adị m njikere maka 2013 ị ga-esi n’azụ m wee nweta 2014 n’afọ! You bụ?
Tags: 20132014ikikeemailafọ ọhụrụAmụmankwalitenjigideASocial Media Marketing
Ihe ndepụta chọrọ maka azụmaahịa obere azụmaahịa 2014
Bụrụ onye Ọkachamara Mgbasa Ọha na Social